Umkhankaso weTobago Beyond uqokelwe ohlwini lwama-International Travel & Tourism Awards
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Imiklomelo » Umkhankaso weTobago Beyond uqokelwe ohlwini lwama-International Travel & Tourism Awards
Izindaba Zezinhlangano • Imiklomelo • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-Trinidad neTobago Breaking News
Umkhankaso weTobago Tourism Agency Limited wokumaketha lapho uya khona, "ITobago Beyond”, Ukhonjiswe ohlwini lwemiklomelo ye-International Travel & Tourism Awards 2019 emkhakheni we“ Best National Tourism Board Campaign ”kanye nowe“ Best Destination Campaign ”.
Kulethwe ngu Imakethe Yezokuvakasha Yomhlaba futhi ngokwesekelwa yi-United Nations World Tourism Organisation, ama-International Travel & Tourism Awards ayisiteji somhlaba wonke esibona futhi esithuthukisa ukusebenza kahle embonini yezokuvakasha nezokuvakasha. Umcimbi Wemiklomelo ka-2019 uzoba ngoLwesibili ngoNovemba 05 eLondon, e-England.
Umklomelo we “Best National Tourism Board Campaign” ukhombisa ukuthi iyiphi indawo ekhombisa ukudlidlizela kwayo, isiko nobuntu bayo ngomkhankaso wabathengi noma wezohwebo oshiya umbukeli eqhubekela phambili phezulu kohlu lwamabhakede abo, noma efuna ukubuya. Umklomelo we "Best Destination Campaign" ubheka ukuthi umkhankaso wendawo oya kuyo uzuze kuphi umthamo nokukhula kwenani ngaphezu kokukhuthaza ukuvakashelwa. Imikhankaso efakiwe ihlolwe kusetshenziswa amamethrikhi abambekayo, kufaka phakathi ubufakazi bokuzibandakanya kwababukeli, isabelomali, nezingqinamba nokuthi zixazululwe kanjani.
Ngokusho kukaNicole Smart, Umhleli Wemiklomelo Yomhlaba Wonke Wezokuvakasha: “Amajaji ethu ahlatshwe umxhwele kakhulu yikhwalithi esezingeni lokungenile, futhi labo abasohlwini olutholwayo bayazi ukuthi bafinyelele ezingeni eliphakeme kakhulu - bazoba phakathi kwabaphambili kunabo bonke umhlaba. ”
Isethulo sikaTobago, “Ukuvuselela ezokuVakasha zeTobago”, sichaze inhloso yomkhankaso i- "Tobago Beyond", okuwukuvuselela isikhalazo samazwe omhlaba seTobago njengendawo enselele yamaholide kulabo abafuna iholide laseCaribbean. Ngezinsizakusebenza ezilinganiselwe ngokuqhathaniswa nezinye izindawo zaseCaribbean, ukugxila ezimakethe ezithile nasezigabeni zabahambi kwakuyingxenye eyinhloko yecebo.
Isethulo sibuye sakhombisa ukuthi wonke ama-KPI womkhankaso (Izinkomba Zokwenza Okusemqoka) asebenze kahle, futhi aholele ekukhuleni okufika kabili kwamanani okufika ezinyangeni eziyi-8, kanti ezinyangeni ezintathu ezedlule kukhombise ukukhula okungu-22%, 29% kanye no-40% ngokulandelana.
Ephawula ngesimemezelo sokuthi uTobago uzokhethwa ohlwini lwezindondo, uNobhala Wezokuvakasha, Amasiko Nezokuthutha, uKhansela Nadine Stewart-Phillips uthe: “Lokhu kufezekile kungenye yezinkomba zokuzibophezela kwethu okuqhubekayo ekuqhubekiseleni phambili umkhakha wezokuvakasha esiqhingini. Lokhu ngokuqinisekile kufakazela iqiniso lokuthi sihamba ngendlela efanele maqondana nokubonakala okukhulu kweTobago okuyiwa kuyo.
Kusukela kwethulwa, umkhankaso we-'Tobago Beyond 'uhehe intshisekelo enkulu yasekhaya neyamazwe omhlaba futhi uveze imiphumela emihle. Kuyangithokozisa ukuthi imizamo yethu iyaqashelwa emhlabeni jikelele futhi ngibheke phambili ezimbuyisweni eziqhubekayo eziyolethwa yilokhu kwaziwa. ”
ULouis Lewis, isikhulu esiphezulu seTobago Tourism Agency Limited, naye uzwakalise ukwaneliseka kwakhe ngalezi zindaba, wathi: “Sihloniphekile ukuthi sikhethwe ohlwini olulodwa hhayi nje kuphela, kodwa imikhakha emibili kule miklomelo ehlonishwayo, ngenxa yemizamo eyejwayelekile yokuthengisa. I-Tobago Tourism Agency. Inhloso yethu ibilokhu njalo ikwenza ukuthi iTobago ibe yindawo yokuzigqamisa ngokwayo isebenzisa umlingiswa oyingqayizivele wesiqhingi nezici ukuqondisa ukuhlola kwethu kokudala nokuthumela imiyalezo, futhi ukuqashelwa kwethu kule miklomelo kukhombisa ukuthi umyalezo wethu womkhiqizo wamukelwa ngokuzwakalayo nangokucacile . ”
I-China yenza ukuhambisa idatha ngaphandle kwezwe kube yindaba...
Inkampani yezindiza yokuqala yaseQatar Airways ukujoyina i-IATA CO2NNECT...
Ukusola uNobhala-Jikelele we-UNWTO kumenza abe yijaji ...